यदि माउण्ट हाकोने ज्वालामुखी फुट्यो भने के गर्ने ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > NEWS > यदि माउण्ट हाकोने ज्वालामुखी फुट्यो भने के गर्ने ?
हाकोने जापानको निकै लोभलाग्दो पर्यटक स्थल हो। यो टोकियोबाट निकै नजिक भएकोले वेकेण्ड र एकदिने ट्रिपको लागि लोकप्रिय ठाउ हो। थुप्रै जापानीहरु हाकोने आफ्नो ब्यस्त जीवन शैलीबाट टाढा भई प्राकृतिक सुन्दरतामा हराउन जान्छन। गर्मिमा पनि पहाडले छेकेको हुनाले निकै शितल हुने हाकोने जापानमा बस्ने बिदेशीहरुको पनि मुख्य गन्तब्य हो। हाकोनेको मनोरम वाताबरणले हजुरलाई टोकियो फर्की, व्यस्ततामा हराउने शक्ति र साहस दिनेछ।
हजुरहरुलाई हकोनेको डरलाग्दो पाटो बताउने छु। यहाँ माउण्ट हाकोने भनिने एक्टिभ ज्वालामुखी रहेको छ। जापान मेटियोरोलोजिकल एजेन्सीले मे १९, २०१९ मा यो ज्वालामुखीको खतराको लेभल २ बनाएको छ। यो भन्दा अघि २ लेभलको खतरा २०१५ माउण्ट हाकोने बिस्फोट हुदा दिईएको थियो। हाकोने लोकप्रिय पर्यटक स्थल भएकोले जवालामुखी बिस्फोट हुदाके गर्ने भनेर जानकारी राख्नु पर्दछ। आजको हाम्रो यो लेखको उद्देस्य हो।
२०१५ को बिस्फोट माउण्ट हाकोनेमा ८०० वर्ष पछि भएको बिस्फोट हो। जुन र जुलाईमा गरेर दुई बिस्फोट भएको थियो। तर ति बिस्फोट निकै साना बिस्फोट भएता पनि ज्वालामुखी गतिबिधि त्यस पश्चात भैरहेको देखिन्छ। त्यहि कारणले २०१५ नोबेम्बरमा खतरालाई लेभल २ मा सारिएको थियो। यसो गर्नाले हाकोनेमा घुम्न जाने पर्यटकको संख्यामा पहिलो बर्सको तुलनामा १८% कमि आएको थियो।
त्यसपछिको वर्षमा ज्वालामुखीको खतरा घट्दै गएको पाइएता पनि हाकोनेका मानिसहरु आफु सतर्क नरहको कुरामा गुनासो गर्ने गर्दछन। उनीहरु ज्वालामुखी जुन सुकै बेला फुट्न सक्ने भएकोले पूर्व तयारि गरेर बस्नु पर्ने बताउछन। उनीहरु २०१५को सानो मानिएको बिस्फोट मात्र एक सुरुवात रहेको बताउछन।
२०१५को बिस्फोटले हाकोने बासिहरुलाई मात्र नभई जापानका सबैलाई त्रशित बनाएको थियो। हाकोने बासि त्यो बिस्फोटले जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्ने भएकोले पूर्व तयार रहनु पर्ने कुरा सिकाएको बताउछन। अहिले हाकोने क्षेत्रमा साना ब्यापारगर्ने मानिसहरु जोखिमको बेला अपनाउनु पर्ने साबधानीका म्यानुअल होटल र पबमा राखिएको बताउछन। बिस्फोट हुदा भागेर बस्न भनेर सुरक्षित स्थान पनि तोकिएको छ. हाकोने बस्न पर्यटक र अन्य पाहुनालाई हरेक खबरको जानकारी गराउने गरिएको छ।
त्यसैगरी हाकोनेमा ज्वालामुखीबाट निस्कने ग्यासको निगरानी गर्न उपकरणहरु जडान गरिएको छ। आपतकालिन स्थितिको लागी तयार रहन त्यहाँका ब्यापारी र हाकोने बासिहरुलाई नियमित रुपमा ईभ्याकुएसन ड्रिल गराउने गरिन्छ। पर्यटकहरुलाई पनि उचित निर्देशन दिईने गरिन्छ र हाकोने ज्वालामुखीको समाचारहरु अप टु डेट गराईन्छ. पर्यटकहरुलाई हाई रिस्क क्षेत्रमा जान पनि रोक लगाईएको छ।
के मानिसहरु हाकोने घुम्न जान मिल्छ ?
खानागावा प्रान्तका गभर्नर र अन्य अधिकारीका अनुसार प्रभावित क्षेत्र ज्वालामुखीको मुख नजिक रहेको छ. त्यसकारण धेरै घुम्न लायक ठाउमा ज्वालामुखीको केहि प्रभाब नपरेको बताईन्छ। मानिसहरु हाकोने अहिले पनि पहिले सरि घुम्न जाने गर्दछन। ईन् , होटल, र हाकोने सहरमा अहिले सम्म ज्वालामुखीको केहि प्रभाब परेको छैन। मानिसहरु हाकोनेको निकै पपुलर लेक आशी गई त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताको मजा लिन सक्दछन। तर त्यस क्षेत्रका रोपवे र केहि बाटो भने हाललाई बन्द गरिएको छ।
विशेषज्ञका अनुसार माउण्ट हाकोनेको स्थिति त्यति भयावहक नरहेको जनाउछन। तर उनीहरु सबै तयार रहनु पर्ने बताउछन। अहिलेलाई ज्वालामुखीको खतराको लेभल २ बनाईएको छ। लेभल २ भनेको ज्वालामुखी को क्रेटर नजिक नजानु भन्ने साबधानी हो। जापानमा ज्वालामुखीलाई खतराको अनुसार लेभल ५ सम्म राखिन्छ।
जापान टापु नै टापुको देश भएकोले भूकम्पीय र ज्वालामुखीको जोखिमले पनि घेरिएको देश हो। जापान मेटियोरोलोजिकल एजेन्सीले यी ज्वालामुखीको नवीनतम जानकारी आफ्नो जनतालाई गराईरहने गर्दछ। यसले गर्दा यहाँका मानिसलाई कुन क्षेत्र बढी खतरा र प्रभावित रहेको भन्ने जानकारी हुने गर्दछ।